Kuuriyada Koonfureed oo ciidankeeda kala baxayso xeebaha Soo... - Axadle Wararka Maanta
Kuuriyada Koonfureed oo ciidankeeda kala baxayso xeebaha Soo…
Seoul (Axadle) – Wasaaradda Gaashaandhigga Kuuriyada Koofureed ayaa shaacisay in ciidamdeeda badda ee la dagaalama kooxaha burcadbadeeda ay kala baxayso xeebaha Soomaaliya, kadib markii qaar ka mid ah askarta laga helay Covid-19.
Sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee Koofurta Kuuriya ee YONHAB 300 oo askari oo saaran Markabka wax burburiya ee The Great ayaa 80 ka mid ah lagu arkay calaamadaha xanuunka, taas oo keentay in xaalad adag ay wajahaan ciidamada badda.
Sidoo kale wasaaradda Gaashaandhigga ee dalkaasi ayaa shaaca ka qaaday inay dajisay qorshaha ciidankan looga saarayo howl-galka la dagaalanka Burcadbadeeda Soomaalida, si ay u helaan daryeel caafimaad, maadaama ay la daala dhacayaan cudurka Covid-19.
Waxaa sidoo kale feejigaan iyo xaalad kelinimo ah la geliyey askarta kale ee la socda markabkaas, si aanay ugu gudbin Fayruska Karoona.
“Bishii Febraayo, ciidamada Kuuriyada Koonfureed ee da’doodu ka yar tahay 30 jir ayaa kaliya haystay fursad ay ku qaataan tallaalka Pfizer ama ma aysan heli karin ka hor ama inta lagu gudajiray howlgalka qayb ahaan sababo la xiriira shuruudahakaydinta Pfizer oo markii dambe dib loo eegay,” ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xukuumadda Seoul.
Si kastaba go’aankan ayaa kusoo aadaya, xilli 20-kii November 2020-kii muddo kordhin horleh loo sameeyey ciidamada badda Kuuriyada Koofureed ee jooga xeebaha Soomaaliya.
Abdiwahab Ahmed 3122 posts
Concerns Africanism with the Congolese
MUHIIM: Lionel Messi Oo Aan Dhammaysan Doonin Heshiiskiisa Barcelona &